ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): Android Tablet (version 4.0.4) ကို Root လုပ်နည်း
Android Phone တွေအတွက် Root လုပ်နည်းတွေပြောပြီးသွားတော့ တချို့က Tablet
တွေမှာ Root လုပ်နည်းကို မေးလာကြပြန်ပါတယ်။ သိကြတဲ့အတိုင်းဘဲ ကျွန်တော်ကလည်း Root တာ
ကို ခပ်ကျွမ်းကျွမ်းရယ်ဆိုတော့ ရှာဖွေနေကြအတိုင်းဘဲ မွှေနှောက်ရှာဖွေလိုက်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်မကျွမ်း
ကျင်တာကြီးကို တင်လိုက်ရင်အမှားပါမှာစိုးလို့ ကျွမ်းကျင်ပြီးသားဆရာသမားတွေတင်ထားတာကို ရှာရှာ
ဖွေဖွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Post လေးကိုတော့ ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ ကိုအာကာဖြိုး ဆီကနေတ
Android Tablet (version 4.0.4) ကို Root လုပ်နည်းပြောပေးမှာပါ
Driver သွင်းဖို့ အဆင်မပြေဘူး အခက်တွေ့နေရင် အောက်ကကောင်လေးဒေါင်းပြီးစက်ထဲ ထည့်ထားပါ
Tablets ထဲက Settings >Security> Unknown Sources ဆိုတာလေးကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ
နောက် Settings > Developer Options > USB debugging ဆိုတာလေးကိုလဲ အမှန်ခြစ်ပေးပါ
ကွန်ပြုတာနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ USB ကြိုးထိုးပါ ကွန်ပြုတာတွင် Android SDK သွင်းထားတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Driverကိုအလိုလိသိမှာပါ
အရင်ဆုံး Zip ကိုဖြေလိုက်ပါ။ V6-SuperCharger-Script.7z ဖိုင်ကို ဖြေပါ V6-SuperCharger-Script.7z ကို ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာ USB-Drivers.7z ကိုထပ်တွေ့ရပါမယ် Driver မသိခဲ့ရင် Driver ရှာပေးရပါမယ် နောက် Root-Script.7z ကို ဖြေပါ Root-Script.bat ကို Run လိုက်ပါ။
တက်လာတဲ့နေရာမှာ Enter နှိပ်ပေးပါ။
1.verify tablet connection.
2.check tablet root capability
3.root my tablet now.
အဲ့ဒီလို3ခု ရွေးခိုင်းပါတယ် ကြိုက်တာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ Tablet ကို Root မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် နံပါတ်3ကို နှိပ်ပြီး Enter နှိပ်ပေးပါ ဒါဆိုရင်တော့ အလိုလို Root သွားပြီးတော့မိမိ Tablet ပေါ်မှာ Super User လေးပေါ်လာပါပြီ။
Super User လေးပေါ်လာရင် ဘာလဲ ဆိုတော့ The End ပေါ့ဗျာနော်
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:22 PM
Labels: Android, Phone, Root
you say how to download it please.